I-Turbine Roll Up Hard Door Door China Manufacturer
Incazelo:Turbine Hard Door Fast,Isivinini esiphezulu sokuphepha kwesango lokungcola,Aluminium Alloy Rapid Door
Home > Imikhiqizo > Isango Eliphakeme Eliphakeme > I-Aluminium Spiral High Speed ​​Door > I-Turbine Roll Up Hard Door Door
I-Turbine Roll Up Hard Door Door
I-Model No.: HF-W7414
Umnyango wokuvinjelwa kanzima ovuthayo: setha ukugcinwa kwe-energy-saving insulation kanye nokusebenza kahle kwemoya yemvelo eminyango emisha yezimboni zensimbi, isivinini sokuvulwa singamamitha ayi-1.5 ngomzuzwana. Ngezinhlelo zokusebenza ezidinga ukuvulwa okusheshayo kwesiteshi sokungena. Ukuqina kwe- insulating 0.7MM aluminium umnyango ophakathi kwe-polyurethane foam, ububanzi obuningi obungama-40MM umnyango obanzi 185MM ngesisindo somitha esingu-1.63KG. Ukuba nesisindo esihle sokushisa nokuqina kwesisindo kanye nezinye izici, ukulinganiswa kwemimoya okungaphezu kuka-117-134 km / h nokweba.
Umnyango ufanelwe ukungena kwendawo yangaphandle nangaphandle nokukhiqiza. Uhlobo lomnyango lwamabhizinisi alondoloze amandla amaningi ngenxa yokulahlekelwa yomoya emoyeni kunezivalo ezivamile zokugcina iminyango yokuvala iminyango esindisa amandla ngamaphesenti ayisishiyagalombili. Ukuvulwa okusheshayo nokuvala umnyango ukuze izinkampani ezisejubane lokujikeleza nokukhiqizwa komnyango zithuthukiswe kakhulu ukuphathwa kwebhizinisi kanye nokukhiqizwa kumele kudlule ukukhethwa kwesiteshi futhi sibheke ngokuqondile nokusebenza kahle kokukhiqiza kanye nokusebenza. Lo mkhiqizo inokwethenjelwa okuphezulu. ukusebenza okulula nokusebenza okulula nokulungisa ngokushesha. Ukulawulwa kweDrayivu usebenzisa ubunzima obuqinile obusebenza kahle futhi obunembile ukuqinisekisa ukusebenza okusheshayo nokunokwethenjelwa kwesistimu ye-door door ukuqinisekisa ukuthi unenkinga yokusebenza ngaphandle konyaka ngaphezu kwezikhathi ezingu-250,000.
Aluminium high speed Kuvunguza umnyango Xhumana Nanje
i-aluminium esindayo roller door shutter Xhumana Nanje
I-Aluminium Fast Turbine Roller Shutter Door Xhumana Nanje
Turbine Hard Door Fast Isivinini esiphezulu sokuphepha kwesango lokungcola Aluminium Alloy Rapid Door I-Turbine Door Fast I-Turbo Hard Door AmaTurbine Fast Doors Turbine Hard Hard Shutter Door I-PVC Curtain Door Fast